Ny Haven ao amin'ny sambo sambo Norveziana
Fialofana avy any Norvezy ny Norvezianina - The Suites Suites and Amenities
Ny kianja Haven ao amin'ny sambo nosy Cruise
Ny kianja Haven ao amin'ny sambo fiaramanidina Norveziana. Courtesy of Cruise Line Norwegian
Ny Haven ao amin'ny sambo fiarandalamby Norveziana dia sariohatra manan-danja ho an'ny vahiny izay mijanona ao amin'ny efitranon'ny The Haven. Eo amin'ny lava 17 sy 18 any avaratra, ny The Haven dia manasongadina ny trano fialantsasatra indrindra amin'ny sambo, miaraka amin'ny trano fisakafoanana manokana, ny tokotany, ny bar, ny gorodona, ny masoandro masoandro ary ny serivisy 24 ora.
Ny Haven dia ny lalan'ny Norvezan'ny Cruise Line izay manolotra ny haavon'ny asa fanompoana sy ny zavatra mahazatra hita matetika amin'ny sambo kely kely ao anaty sambo fiaramanidina goavam-be.
Ny vahiny izay mipetraka ao The Haven dia manana tombony toy ny fanombohana sy fametrahana laharam-pahamehana, fidirana amin'ny fanentanana laharam-pahamehana, machine espresso / cappuccino ao amin'ny efitranon'ny tsirairay, gareza kofehy gourmet isaky ny hariva, ary ny lambam-pandaminana miavaka sy ny fanatanjahan-tena.
Dimy amby sivifolo sy dimy no afaka mahazo ny The Haven amin'ny fandosiran'i Norvezy. Misy sivy amby enimpolo sy sivily ao amin'ny The Haven, ary 26 no any ivelan'ny The Haven, fa ireo vahiny ao amin'ireo pentuos na aty ivelany ireo dia afaka mitsidika ny efitranon'ny The Haven miaraka amin'ny karatra misy ny efitranony ary mankafy ireo fialan-tsasatra toy ny vahiny mipetraka ao anatiny .
Ity lahatsoratra ity dia manome fitsidihana ny The Haven Courtyard, Restaurant, Bar, ary ny sasany amin'ireo Suites ao amin'ny Escape Nosy. Ny sambo fiaramanidina hafa ao amin'ny fiaramanidin'ny Cruiseur Norveziana koa dia manana faritra mitovitovy amin'izany:
Ny Haven ao amin'ny Breakaway Norveziana
The Haven amin'ny fidirana amin'ny Norveziana
The Haven Courtyard. Fialan'i Norvezy (c) Linda Garrison
Ny tokotanin'ny trano roa ao The Haven dia manana tafo rindrina, dobo filomanosana, tadio roa, sarona masoandro tsy miankina, efitra fisakafoana manokana momba ny spa, faritra miovaova, ary sauna.
Araka ny hita ao amin'ny sary manaraka, ny Courtyard The Haven ihany koa dia misy toerana mendrika sy mangatsiatsiaka.
Miala ao amin'ny kianja Haven
Ny salaka tahaka an'ity iray ity dia tena mahafinaritra sy mahafinaritra tokoa, sa tsy izany? Ny sasany tamin'ireo vahiny dia tia ny manana toerana hanamboarana na hamaky boky.
Ny Restaurant Haven ao amin'ny sambo Nosy Cruise
Ny Restaurant Haven amin'ny fandosiran'i Norvezy. Courtesy of Cruise Line Norwegian
Ao amin'ny The Haven complex, ny Restaurant The Haven dia sehatra tsy miankina sy mahasalama ho an'ny vahiny mipetraka ao amin'ny 95 Suites of The Haven. Ny seranam-piaramanidina dia manolotra lovia miavaka ary misy karazana divay mahaliana.
Ireo izay mijanona ao amin'ny The Haven dia afaka misakafo ihany koa amin'ireo toerana hafa 27 ao amin'ny Escape Nosy Norvezy.
Ny Haven amin'ny fandosiran'i Norvezy. Fialan'i Norvezy (c) Linda Garrison
Ankoatra ny efitrano fitsaboana, trano fisakafoanana ary ny tokotanin'ny trano, The Haven ao amin'ny Escape Nosy koa dia manana efitra fandraisam-bahiny mahafinaritra ho an'ireo vahiny. Ao ambadiky ny efitrano dia ny biraon'ny Concierge Haven, izay ahafahan'ny vahiny manamboatra toeram-pisakafoanana, spa, na famandrihana.
Ny Suite Escape Deluxe avy any Norvezy ao The Haven
Ny Suite Escape Deluxe avy any Norvezy ao The Haven. Courtesy of Cruise Line Norwegian
Ny efitrano efatra an'ny Deluxe Owner amin'ny fandosiran'i Norvezy dia sambo lehibe indrindra sy be pitsiny indrindra amin'ny sambo. Mirefy 1,345 metatra toradroa, ireto efitrano ireto dia manana efitrano fandraisam-bahiny misy toeram-pisakafoanana, baranjely, trano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny fialambolam-bolo, batisan-tena, ary balcony roa. Tiako ny varavarankely sy varavarankely misy ny efitrano. Lehibe noho ny trano fonenana maro izany!
Ity sarin'ny Deluxe Owner Suite ao The Haven amin'ny fandosiran'i Norvezy ity dia mampiseho ny baranjely, kafe, ary toerana fisakafoanana ao amin'ny efitrano.
Ny trano fandroahana Norvezianina Deluxe Bedroom ao The Haven
Ny trano fandroahana Norvezianina Deluxe Bedroom ao The Haven. Courtesy of Cruise Line Norwegian
Tahaka ny nantenaina, ny trano fidiovana maoderina ao amin'ny Suite Suite Deluxe ao The Haven ao amin'ny sambo fiarandalamby Norveziana dia lehibe sy mahavariana, misy lavaka roa, marbra maromaro, ary sotro sy divay.
Haven 'ny tompona Haven ao amin'ny sambo Nosy Cruise
Haven Suite amin'ny fandosiran'i Norvezy. Courtesy of Cruise Line Norwegian
Ny trano fandroahana Norveziana dia manana efitrano efatra an'ny tompony any The Haven. Mirefy 572 metatra toradroa, ireto efitrano ireto dia manana efitrano mitokana miaraka amin'ny bain, trano sy toeram-pisakafoanana, balkon, ary bisy halimo ho an'ny vahiny.
Ny efitrano mitokana ao amin'ny The Haven Owner Suite dia tsara tarehy, miaraka am-pandriana lehibe sy lehibe fatorana mampifandray.
Norvezy fialan-tsasatra norakofana trano fandroana misy balcony
Norvezy fialan-tsasatra norakofana trano fandroana misy balcony. Fialan'i Norvezy (c) Linda Garrison
Ny fiara-mivezivezy any an-dalamby sy avy any atsinanana ao amin'ny sambo fiarandalamby Norveziana dia tsy hita ao amin'ny tranobe The Haven, fa ireo vahiny izay mipetraka ao amin'ireo efitrano 451-534 metatra toradroa ireo dia manana fidirana amin'ny fanamorana manokana. Araka ny hita eo amin'ity sary ity sy ny manaraka, dia manana efitrano fisakafoanana sy efitra fisakafo miaraka amin'ny bain izy ireo.
Toerana hafa any The Haven amin'ny fandosiran'i Norvezy
Noho ny toerana misy azy, ity Penthouse Suite mitatao ao an-tsambo ity dia misy lavarangana iray eo akaikin'ny efitrano fisakafoana / efitra fisakafoana sy ireo varavarankely mihidy ao amin'ny efitrano fandriana.
Trano famaranana efitrano fatoriana roa tao The Haven tamin'ny fandosiran'i Norvezy
Ny Haven ao amin'ny Fandriampahalemana any Norvezy dia manana trano famaranana efitrano fatoriana miisa 25 izay matory amin'ny enina enina ao amin'ny efitranony anankiroa, toerana roa fandroana. Ireo efitrano fohy 540 metatra toradro dia manana balkon tsy miankina ary varavarankely misy lavaka lehibe. Ny efitra fandroana maoderina dia goavana, miaraka amin'ny dite manambady, roa lavenona lavenona, ary ny lava-bao.
Tao anatin'ny mariazin-tsarin'i Cunard Line Mary 2
Ny Nosy Anglisy sy ny Fjords any Norvezy Miantso ny Jirom-borona any amin'ny ranomasina
Jiroman'ny seza sy salala - Royal Caribbean Jewel avy amin'ny ranomasina
Fialan-tsasatry ny Norvezianina - Fandefasana ivelan'ny trano
Marina avy any Ocean Cruises - Profile and Photo Tour
Oasis ao amin'ny Seas Aqua Theatre
Aiza ny Ski sy Snowboard any Arizona
Mitsangàna eo amin'ny Paddleboarding any Minneapolis, Md Paoly sy ireo tanànan'ny Twin
Insta Golf Shoes - Zavatra hafa tanteraka
Borgata Casino Hotel ao Atlantic City, NJ
Toerana tsara indrindra ahazoana kafe amin'ny Disney World
Halloween Fun ho an'ny fianakaviana
Kicking Stone Resort Casino Bingo, Slots and More
LakeForest Mall - Shopping any Gaithersburg, Maryland
Fomba hahazoana an'i Frankfurt mankany Munich
Mamindra ny hazo krismasy
Fantatrao ve ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Italia?
The 10 Best Country House Hotels any UK
8 antony hitsidihana an'i Walthamstow